Maxay Tahay (iyo Sidee) Loogu Biiriyaa Dib-U-Soo-Celinta Istaraatiijiyaddaada Dijital ah | Martech Zone
Maxay Tahay (iyo Sidee) Loogu Biiriyaa Dib-u-habeynta Istaraatiijiyaddaada Dijital ah
Arbacada, December 5, 2012 Talaado, Disembar 4, 2012 Caroline Watts
Dib-u-habeyn, ku dhaqanka u adeegida xayeysiinta dadka horey kula soo shaqeeyay khadka tooska ah, waxay noqotay mid jecel adduunka suuqgeynta dhijitaalka ah, iyo sabab wanaagsan: waa wax aad iyo aad u awood badan isla markaana aad u qiimo jaban.
Dib-u-dejinta, noocyadeeda kala duwan, waxay u adeegi kartaa dhammaystiridda istiraatiijiyad dijitaal ah oo jirta, waxayna kaa caawin kartaa inaad wax badan ka hesho ololayaasha aad horay u waddo. Qoraalkan waxaan ku dabooli doonaa dhowr siyaabood oo suuqleydu ay uga faa'iideysan karaan dib-u-dejinta si ay u xoojiyaan awoodda kanaallada ay mar hore isticmaalayaan. Laakiin marka hore, halkan waa wax yar oo asal ah oo ku saabsan tikniyoolajiyadda lafteeda:
Sidee iyo maxay u shaqaysaa dib-u-dejinta
Qaabkeeda ugu fudud, dib-u-celinta waxay isticmaashaa cookie fudud oo biraawsar ah oo aan la aqoon si ay ugu adeegto xayeysiis gaar ah dadka booqday boggaaga laakiin ka tagay iyadoon wax iibsan. Aad ayey waxtar u leedahay maxaa yeelay waxay diirada saareysaa xayeysiiskaaga dadka aqoonta u leh oo laga yaabo inay xiiseeyaan wax soo saarkaaga ama adeeggaaga. Tani waxay kuu oggolaaneysaa inaad kordhiso beddelaadda dhinacyada xiisaynaya iyo inaad kharashyada hoos u dhigto adoo u kaydinaya doolarkaaga xayeysiiska dhagaystayaashaada aqoonta u leh.
Tiknoolajiyad isku mid ah ayaa sidoo kale lagu dabaqi karaa macaamiisha kale ee kala duwan, sida furitaanka emaylka, waxayna noqon kartaa mid si wax ku ool ah u dhammaystira qalabka kale ee suuqgeynta aad u isticmaasho inaad kula xiriirto macaamiisha cusub ama aad ula fal gasho kuwa hadda jira.
Dib-u-habeynta Suuqgeeyaasha Goobista
Haddii aad miisaaniyad muhiim ah geliso Raadinta PPC, Dib-u-habeynta ayaa hubaal ah in lagu daro qalabkaaga dijitaalka ah. Xayeysiisyada raadinta ayaa ah mid ka mid ah hababka ugu awoodda badan ee lagu kaxeeyo taraafikada bilowga ah ee bartaada, laakiin intee in le'eg ayay taraafikadaas ku beddelaysaa booqashada ugu horreysa? Haddii aad tahay sida inta badan suuqleyda, aqlabiyadda dadka aad u keento bartaada ma beddeleyso isla markiiba, haddii ay gabi ahaanba beddelaan. Tani waa halka dib-u-habeynta ay ka timaaddo. Dib-u-habeynta ayaa kaa caawinaysa inaad kordhiso beddelaadyada rajooyinka qiimaha leh ee booqday bartaada, laakiin aan wax iibsan.
Haddii aad ku tiirsanaato culus raadinta PPC, waxaad bixinaysaa lacag fiican oo aad dadka ugu keento bartaada, dib-u-habeynta ayaa kaa caawin karta inaad sare u qaaddo kharashka. Haddii aad u isticmaasho bogag degitaan gaar ah oo loogu talagalay taraafikadaada raadinta lacag bixinta, waa wax aad u fudud oo fudud in dib loogu celiyo martida bogga (yada) degitaanka sidoo kale.
Dib-u-habeynta Suuqgeeyayaasha Mawduucyada
Mid ka mid ah caqabadaha ugu waaweyn ee suuqgeeyayaasha mawduucyada ayaa akhristayaasha joogtada ah u rogaysa macaamiil. In kasta oo suuq-geynta nuxurku yahay hab wax ku ool ah oo wax ku ool ah oo lagu dhiirrigeliyo booqashooyinka websaydhka cusub, ROI-ga wanaagsan ayaa inta badan aad u adag in la gaaro. Dhiirrigelinta isqorista emaylka iyo ku darista qiimaha ayaa si tartiib tartiib ah u caawin kara, laakiin had iyo jeer kuma filna. Haddii aad si guul leh ugu kaxeyso taraafikada waxyaabahaaga, laakiin aadan arkeynin beddelaadyada aad jeceshahay, dib u habeynta ayaa kaa caawin kara.
Waad dib u habeyn kartaa booqdayaasha u socda bartaada si ay u aqriyaan waxyaabaha aad ka kooban tahay, waxaadna ku dhiirrigelin kartaa inay hubiyaan boggaga wax soo saarka iyo adeegga. Mawduucu wuxuu dhisayaa dhagaystayaal ku habboon ganacsigaaga, iyo dib-u-habeynta ayaa kaa caawin kara inaad dhagaystayaashaas ugu beddesho macaamiil.
Dib-u-habeynta Suuqleyda Emailka
Suuqgeynta iimaylku waa aalad muhiim u ah suuqgeyaal badan oo dijitaal ah. Haddii aad diirada saareyso emaylka, waxaa laga yaabaa inaanay muuqan sida aaladda xayeysiinta soo bandhigida sida dib-u-dejintu ay si wax ku ool ah u caawin karto, laakiin dib-u-soo-celinta iimaylku waa aaladda ugu fiican ee suuqgeeyayaasha emailka.
Dib-u-habeynta emaylku waxay kuu oggolaaneysaa inaad ugu adeegto xayeysiis bandhig qof kasta oo furaya emayl, haddii ay gujinayaan iyo haddii kale. Ka fikir haddii qof kasta oo furayo e-maylladaadu uu arki karo astaantaada inta aad shabakadda ka daawaneyso mar dambe? Taasi waa dhab ahaan waxa emaylka dib-u-dejintu sameyn karo. Waxaad diri kartaa oo keliya emayl aad u tiro badan adigoon ka daalin liisaskaaga, iyo dib-u-habeynta emaylku waxay fursad siineysaa inaad ku sii sugnaato dadka ku soo dira emailkaaga adigoon ku buux dhaafin farriimaha emaylka ee xad-dhaafka ah.
Haddii aad ka labalabeyso inaad bilowdo olole bandhig sababtoo ah waxaad durba wadaa ololeyaal suuqgeyn guul leh, cabsidaada ayaa laga yaabaa inaysan qiil u helin. Dib-u-habeynta ayaa kaa caawin karta inaad waxbadan ka hesho kanaallada aad horay u isticmaaleysay, nooc kasta oo ay ahaadaan kuwaasi.
Tags: dib u habeyndib-u-habeynta emaylkaraadinta lacag bixintadib u habeynta ppcdib-u-celinta
Caroline Watts waa maamule suuq geyn at Soo-saaraha, Adeeg bixiye soo-bandhig buuxa ah oo ku takhasusay dib-u-dejinta iyo bartilmaameedka dhagaystayaasha.
Qiyaasta Ilaha: Is-hagaajinta Suuq-geynta Bulshada iyo Falanqaynta
Wejiga Cusub ee Qalabka Mashiinka Raadinta